Gatiin qorichaa US maaliif kan biyyoota biraarra qaala'a? - BBC News Afaan Oromoo
Gatiin qorichaa US maaliif kan biyyoota biraarra qaala'a?
Goodayyaa suuraa Ameerikaatti dhukkubsattoonni ofiin kanfalatan baayyeedhaaf gatiin qorchoota hajajamanii kan hindanda'amne ta'aa jira.
Waggoota dheeraaf industiriiwwan qorichaa US abbootii siyaasaa qabachuu isaaniitiin kan ka'ee kan 'xuqamu hindandeenye'' jedhamun beekamu..
Booda kana garuu dhimmichi haala faallaan kan deema jiru fakkaata.
Jalqaba baatii kanattis, bulchitoonni 44 kubaaniyoonni qoricha omishan waa'ee gatiisaanii sirreessuuf daba hojjataniiru jechuun himannaa bananiiru.
Dhiheenyattis hojjattoonni qorichaa tarree gatii qorichootaa beeksisa TV isaanii akka ifa taasisan, bulchiinsi Traamp beeksiseera.
Gatii qorichaa gad buusuun dhimmoota duula na filadhaa Traamp keessaa tokko. Ajandaa kunis haala ittiin dhimmicha hiikuuf yaadan ta'ulleen, warra rippablikaanootaa fi Dimokiraatotaan kan deegarame ture.
Torbe darbe, bakka buutuu Dimokraatotaa kan ta'ate Aleksaandariyaa Okaasiyoo Korteez jiddu galuunshee mata duree dubbii ta'ee ture.
Isheenis gatiin qoricha HIV kan biyya Awustiraaliyaatti doolaara 8 ta'e maaliif Ameerikaatti doolaara kuma 2 akka ta'e kubbaaniyaa 'Gilead' kan qoricha hedduu dhiyeessu gaaffattee turte.
''Namoonni sababii tokko malee du'aa jiru,'' jetti.
Goodayyaa suuraa Osaasiyo-Kortez: "Namoonni sababii tokko malee du'aa jiru"
Qorichoonni ajajaman US'tti hangam qaala'u?
Akka qorannoo 'Commonwealth Foundation' tti gatiin qorichaa US addunyaa kamiyyuu caalaa kan ol ka'eedha.
Dhaabbanni Walta'iinsa Guddina Dinagdee (OECD) Ameerikaanoonni jiddugalaan waggaatti qorichaaf doolaara 1,200 baasuu. Kunis addunyaarratti isa olaanaadha.
Manni Barnootaa Fayyaa Hawaasaa Haarvaard biyyoota guddatan kan biraa keessatti dolaara 466 fi 939 jidduutti argama.
Qorichi kaansarii dhiigaa US tti ji'aan doolaara kuma 70 yoo ta'u, Meeksiikootti doolaara kuma 2, Kolombiyaatti ammoo doolaara 1,100.
Qorichi 'Humira' kan dhukkuba ho'iinsaa wallaanuuf tajaajilu Swizarlaandiitti doolaara 822 yoo ta'u, US tti doolaara 2,669.
Insuliniin ammoo Kaanaadaatti doolaara 38 yoo ta'u Ameerikaatti doolaara 200.
Goodayyaa suuraa Truvada qorich namoonni HIV waliin njiraatan fudhatan Ameerikaatti $2,000 yoo ta'u Awustiraaliyaatti $8
Kanfaltii kana eenyutuu kanfalu danda'aa?
Dhaabbanni Qo'annoo fi Omisha Qorichawwanii Ameerikaa (Phrma) kan industiriiwwan Ameerikaa bakka bu'uu ibsa baaseen, ''biyyattii keessatti namni wallaansaaf gatii kana kanfalu danda'u hinjiru jechuun ni danda'ama,'' jedheera.
US sagantaalee ummataa fi filmaatawwan inshuraansii dhunfaa qabatu, kana jechuun namoonni gatii qorichaa gutuu hinkafalan.
Akka Phrma'n jedhutti, gatiin kunis hirrisa gatii kallattiin kubaaniyoota inshuraansii waliin taasifamu ykn kan qaama sadaffaa kan hin hammanneedha.
Rakkinni guddaan ammoo namoonni miliyoon 27 ta'an Ameerikaa keessatti inshuraansii fayyaakan hinqabnee ta'uu isaaniiti. Kana jechuunis jarri kuna gatii qorichaa, hospitala fi kanfaltii doktoraa kiisii isaaniitii kanfaluu qabaatu.
Goodayyaa suuraa T
Attamiin gatiiwwan kana mirkanneessu?
"Saayinsiin omisha qorichaatiin walqabatee guutuu biyyattii keessatti gaggeefamu waggoota 10n dura akka sobaatti ilaalama ture,'' jedha Phrma.
Qorannoo, guddinnii fi kalaqni baasii olaanaa barbaada.
''Fakkeenyi tokko insulin qorichi jaarraa tokko dura argame waggoota 15f haaluma ammaatiin gabaarra ture. Gatiin isaa parsantaa 30 ol guddisan,''
''Omisha gara biraa haala walfakkaatuun gatiinsaa ol ka'e yaaduun rakkisaadha.''
Biyyoota biraa keessatti, tajaajilli fayyaan hawaasaa ummata hunda kan haguuguudha. Akkasumas gatii irratti mari'achuuf kan dandeettii olaanaa qabu garuu sirna Ameerikaa keessatti kun ta'aa hin jiru.
Goodayyaa suuraa Omishtoonni qorichaa s gatiinsaanii kan kalaqa, qorannoo fi guddina xiyyeeffannaa keessa galcheedha jedhu
Qorichi hundaaf ta'u dhabamuu
Mana barnootaa Wallaansaa Haarvaarditti giddugala Bioethics keesa kan hojjetu Aaron Kesselheim, BBC'tti akka himaniitti, US gatii qorichootaa to'achuuf maala ykn tooftaa hin qabdu.
Akka isheen jetutti, Omishtoonni barootaaf fayidaa isaaniif qofa gabaa qabatanii turan.
Biyyoota biraa waliin wal biratti yoo ilaalame, US keessatti qorichoota waan hundaaf tajaajilaniif haalli jajabeessu hin jiru jetti.
Gamtaan Awurooppaa qoricha farra ilbiisotaa hambisuuf jedha
''Aadaadhaan FDAn attamiin akka qorichi hundaaf tajaajilu itti hojjatamurratti haalli to'annoo hinturre. Sababiiwwan baayyeedhaan, kubbaniyoonni qoricha omishan akka qorichoonni hundaaf tajaajilan hin omishamneef waliigalteerra gahaniiru,'' jetti.
Goodayyaa suuraa US keessatti namoota miliyoon 27 olitii inshuraaniisii hinqabne.
Invastimentii ummataafi bu'aa dhuunfaa
Qeeqxoonni baayyeen akka jedhanitti qorannoowwan qorichaa gara qoricha haaraatti geessan baayyenis yunivarsitiiwwanii fi jiddugalawwan qorannoo maallaqa ummataatiin deeggaramu..
Fakkeenyi tokkoos CART, wallansa jiinii yunvarsitii Peensyilvaanian hojjatameedha. Innis Novaartis kan ammaan tana doolaara 475,000tti gurguraa jiruun bitame.
Haaluma walfakkaatunis deeggarsi maallaqa ummataa qoricha Truvaadaa- kan HIV ittisuuf oluufi gatiinsaa US keessatti walmormisiisaa ta'ees kanfalameera.
''Nuti ummanni qorichi kun akka omishamu deeggareera. Isaafis ni kaffalla,'' jette jirti.
"Osoo abbummaan qorichoota kanneen kan ummataa ta'ee jiruu amma garuu kan dhunfaa ta'eera.''
Gamtaan Awurooppaa qoricha farra ilbiisotaa neonicotinoids jedhamu hambisuuf jedha